5 Best National Ememe Na Europe na-enweta | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Best National Ememe Na Europe na-enweta
European mba n'anya na-eme ememe ha mba ememe - karịsịa ndị na-ahụ a otutu njem nleta. Ị na-eme atụmatụ ịhụ otu n'ime mba ndị a n'oge ha na mba ememe? Ọ bụrụ otú ahụ, e nwere ọtụtụ ụzọ na- iso ememe!
Ị ga-enwe ohere magburu onwe ya ịmụta a bit ọzọ banyere na mba akụkọ ihe mere eme. enwe obodo nganga pụrụ iduga gị aka ịghọta na mba na ndị ya ọbụna ihe. Ka anyị nwere a lee anya na 5 kacha mma mba ememe na Europe:
Queen nke Official Birthday, United Kingdom
King George II na-achị onye guzobere ọdịnala Ememme edidem ụbọchị ọmụmụ na 1748. Kemgbe ahụ, na United Alaeze na-eme ememe ụbọchị ọmụmụ nke ya eze. Otú ọ dị, ha gbanwere ụbọchị a ugboro ole na ole. Ugbu a, ha na-eme ememe Queen nke Official Birthday na nke abụọ Saturday nke June. Ọ bụrụ na ị na-na England n'oge ahụ, i nwere ike ịhụ Queen si ụbọchị ọmụmụ Na Na. The ememe a na-mara dị ka Trooping ndị Agba.
* The picture na Blog feature image bụ maka Queen si Official Birthday Celebrations
Ịtali usọrọ ha Republic ụbọchị on June 2nd, nke bụ a omenala ha malitere na 1946. Ịtụ vootu na ihu ọma nke abolishing onyeeze, Ịtali meghere ụzọ ha Republic. Otú ọ dị, ha kpaliri ememe ụbọchị mbụ Saturday na June na 1977. Ha na-eche na mbụ ụbọchị gosipụtara ezighị na ha aku na uba. Ha na anabatawo ochie ụbọchị na 2001. Enwere ọtụtụ ememe na-agba àmà ofụri Italy na Republic Day. The kasị akpali akpali anya bụ flyover site Italian Air Force.
The Swedes usọrọ ha National Day on June 6. Ọ bụ a-eweta ọṅụ maka dum obodo. Ha guzobere ha Flag Day ememe na 1916, na ugbu a ọ bụ a ụbọchị nke fun na-atụrụ. Enwere concerts, ememme, na omume dịgasị iche iche ị pụrụ ịga. Ọ bụkwa ụbọchị mgbe ọhụrụ Swedes eze nweta ha bụ ụmụ amaala. Sweden na-eme ka n'aka na onye ọ bụla na-ele welcome na ha Flag Day!
Mgbe ọ na-abịakwute French, ha ụbọchị nke mpako n'ihi mba bụ na July 14. Ọ kara ncheta nke batara nke Bastille. Nke ahụ bụ ihe dị mkpa mere na French mgbanwe ke 1789. E meela a agha Nme usọrọ ọ fọrọ nke nta kwa afọ kemgbe 1880. Ọ bụ ihe ịtụnanya n'anya ka le! Otú ọ dị, e nwere ọtụtụ ndị ọzọ ememe ịhụ nakwa. Bastille Day bụ oge dị mma na-na France, na mma na Paris.
Swiss National Day bụ August 1st. Ọ na-agba na ụbọchị mgbe atọ okobot cantons of Switzerland n'otu 1291. The Swiss ha National Day kpọrọ. Otu n'ime isi ihe bụ a okwu si chancelo ma ọ bụ ndị ọzọ nọ n'ọkwá dị elu. E nwekwara a Nme na Zurich. I nwere ike ịga ememe na obodo ndị ọzọ na obodo nta dị ka nke ọma. Ọmụmaatụ, Switzerland ịhụnanya ha obodo ezumike mgbaba. Ski ntụrụndụ ndị ọzọ mbụ na klas ebe-abụ mgbe National Day.
National ememe na Europe ndị a oké ohere ịmụ ihe banyere akụkọ ihe mere eme nke mba ị na-eleta. Ọ bụ na-mgbe niile a ụbọchị jupụtara fun eme ihe na parades.
Ịchụ a Ezumike na Europe na otu n'ime ndị a National Ememe? AKWỤKWỌ gị Train Tickets na-enwe!
Ị chọrọ Embed anyị blog post 5 Best National Ememe na Europe na na gị na saịtị? ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-national-holidays-europe%2F- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#HolidayinEurope #ememe #nationalholiday #nationalholidays europetravel